Maxaad ka Taqaana Jeelka “Xaa’ir” ee lagu xidhay Amiirada Boqortooyada Sucuudiga ? | Hawraar
January 7, 2018 Xiisaha/Xulashada
Maxaad ka Taqaana Jeelka “Xaa’ir” ee lagu xidhay Amiirada Boqortooyada Sucuudiga ?
Boqortooyada Dalka Sucuudiga ayaa waxa ay Maalintii Sabtidii shalay waxa ay ku dhaqaaqday talaabo aan hore loo arag ,talaabadaasi ayaa waxa ay ahayd in qaar ka mid ah amiirada Dalkaasi ee waliba Ilma Aal-sucuud Xabsiga loo taxaabay kadib markii ay ka hor yimaadeen go’aamo ay boqortooyada Dalkaasi soo saartay .
Haddaba Xabsiga amase Jeelka lagu xidhay Amiirada ayaa waxa magiciisa la yidhaahdaa Xaa’ir,jeelkani ayaa waxa uu ka mid yahay shanta Jeel ee ugu waawayn Dalkaasi ,sidoo kalana waxa uu ka mid yahay Jeelasha ugu Amaanka adag ka dhisan Dalkaasi .
Sawirkani hoos ku xusan waa mid ka mid ah Qolalka Hurdada ee uu Jeelkaasi leeyahay :
Jeelka Xaa’ir ayaa waxa uu ku yaala Koonfurta Magaala Madaxda Dalkaasi ee Riyad waxa aanu u jiraa 40Km ,jeelkan oo si aad ah loo ilaaliyo ayuaa waxa sidoo kale la sheegay in Dadka ugu badan ee ku xidhan ay yihiin Dad lagu soo eedeeyay arrimo la xidhiidha Argagixisa nimo .
Dadka Jeelkani ku xidhan ayaa waxa ka mid ah dad lagu soo eedeeyay in ay ka mid ahaayeen Dadkii fuliyay qarixii 11 September ,sidoo kalana waxa ka mid ah kuwa lagu soo eedeeyay falal noocaasi ookala ah oo ay ka dhex fuliyeen gudaha Dalka Sucuudiga ,iyo sidoo kale kuwa lagu soo eedeeyay in ay ka mid yihiin Kooxda Daacish ,waxa kale oo ka mid ah Dadka ku xidhan jeelkani siyaasiyiin kala duwan .
Jeelkan ayaa waxa la furay sanadkii 1983kii ,sanadkii 2002dii ayaa mid ka mid ah maxaabiistii ku xidhnaa jeelkani ayaa waxa uu gubay qayb ka mid ah jeelkaasi ,dabkaasi ayaa waxa uu galaaftay Noolosha 140 Maxbuus iyo sidoo kale 40 Askari oo ka mid ahaa ilaalada Xabsigaasi.
haddaba Xabsiga Xaa’ir ayaa ah Xabsiga haatan lagu xidhay 11 Amiir oo ka mid ah Aal-sucuud kuwaasi oo ka soo hor jeedsaday Amaro ay soo saaratay Boqortooyada Dalkaasi .